क्रिकेटर शामीमाथि पत्नीको आरोप – कयौँ महिलासँग उनको अवैद्य सम्बन्ध छ | Taja OnlineKhabar
कोलकाता । भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामीमाथि उनकी पत्नी हसीन जहाँले परस्त्री गमनको आरोप लगाएकी छिन् ।
उनका अनुसार शमीको अन्य कयौँ महिलाहरुसँग अनैतिक सम्बन्ध रहेको छ । जसमा केही विदेशी महिलाहरु पनि रहेका छन् ।
हसीन जहाँले कथितरुपमा शमी र अन्य महिलाहरुसँग कुराकानीको मोबाइल स्क्रीन सट आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर र वाट्सएपमा सेयर गरेकी छन् ।
शमी अहिले धर्मशालामा देवधर ट्रफी खलिरहेका छन् । उनको तर्फबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।
शमीमाथि मारपीटको पनि आरोप
हसीन जहाँका अनुसार उनीसँग आफ्नोविरुद्ध कयौँ प्रमाणहरु रहेका छन् । जसबाट शमीको अन्य महिलाहरुसँग अनैतिक सम्बन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ । यसमध्ये कयौँसँग उनको यौनसम्बन्ध पनि बनिसकेको छ ।
दक्षिण अफ्रिका टुरबाट फर्केपछि शामीले उनीसँग मारपीट गरेको पनि आरोप छ ।
के–के प्रमाण पेश गरिन् ?
हसीन जहाँको कथित एकाउन्टबाट शमीविरुद्ध पेश गरिएको प्रमाणहरुमा मोबाइलबाट अन्य महिलासँग गरिएको च्याटको स्क्रिन सट रहेको जसमा अश्लिल कुराकानी समावेश छ ।
साथै, शमीको प्रेमिका भन्दै केही विदेशी महिलाहरुको पनि फोटो शेयर गरिएको छ । यी पछिल्लो पोष्ट दुई दिनको अन्तरालमा गरिएको हो ।
सेक्स च्याट गर्न लगाउँथे
हसीनले एक समाचार च्यानलसँग कुरा गर्दै भनेकी छिन्, ‘जहाँ–जहाँ खेल हुन्थ्यो, त्यहाँ उनले युवतीहरु बोलाउने गर्थे । उनी युवतीहरुलाई नुहाउँदै गर्दा भिडियो कलिङ गर्न लगाउँथे ।’
‘शमी बीएमडब्लु चलाउँछन् । उनको सीटको तल ४ वटा कण्डोम भेटिएको थियो,’ हसीनले भनिन्, ‘उनी दुबई गएका थिए । त्यहाँ पनि उनले युवतीहरुलाई आफ्नो कोठामा बोलाएका थिए ।
यसअघि, कट्टपन्थीको निशानामा शमी
जुन २०१४ मा शमीको विवाह कोलकाता निवासी हसीन जहाँसँग भएको थियो । उनीहरुको एक छोरी रहेकी छिन् । हसीन पूर्व मोडल पनि हुन् । आफ्नो पत्नीसँग खिचिएको तस्विरका कारण उनी कयौँ पटक कट्टरपन्थीहरुको निशानामा परिसकेका छन् ।
को हुन् शमी ?
युपी निवासी मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेट टिमका फास्ट बलर हुन् । सन् २००५ मा उनी १६ वर्षको उमेरमा क्रिकेट बन्न कोलाकाता पुगेका थिए । त्यहाँ उनले डलहौजी एथ्लेटिक्स क्लबबाट खेल्न शुरु गरे । शमीका पिता तौसिफ अली पनि आफ्नो जमानाको फास्ट बलर नै थिए ।